Miantraika Amin’ireo Mpiasa sy Mpivezivezy Ny “Adin’Haban-dalana” Eo Amin’i Singapore Sy i Malayzia · Global Voices teny Malagasy
Miantraika Amin'ireo Mpiasa sy Mpivezivezy Ny “Adin'Haban-dalana” Eo Amin'i Singapore Sy i Malayzia
Voadika ny 13 Aogositra 2014 15:32 GMT
Fefiloha ao Singapore-Johor. Sary tao amin'ny Wikipedia
Mampiasa ny fefiloha mampifandray an'i Malayzia-Singapore, izay mampitohy ny tanànan'i Johor ao Malayzia sy ny tanàndehiben'i Woodlands ao Singapore ireo mpiasa, mpianatra, mpivarotra ary mpizaha tany an'arivony. Nanjary nahatonga azy ho zotran-dalana sy tetezana iankinan'ny ain-dehibe hoan'ny firenena roa tonta izany. Misy ny haban-dalana alain'ny roa tonta amin'ny fiampitàna izany lalana izany ho fikojakojana ny lalana sy handaminana ny fidiran'ireo fiara.
Nampiakatra ny saran'ny fahazoan-dalana miditra hoan'ny fiara (VEP) i Singapore tamin'ny 1 Aogositra. I Malayzia kosa tetsy andaniny, namaly tamin'ny fampiakarana ny saran'ny fiampitàna ao akaikin'ny fefiloha. Nidangana tampoka manakaiky ny 400 isanjato teo ny saran'ny fiampitàna amin'ny fefiloha.
Nitaraina avy hatrany amin'ny fiantraikan'ny haban-dalana lafo dia lafo eo amin'ny toekarana natiny ireo mpiserasera tao Singapore. Nampitandrina ilay bilaogera “Better off Ted”, fa hiteraka olana goavana eo amin'ny varotra eo amin'ireo firenena roa tonta izany.
Tsy natao am-pisainana araka ny tokony ho izy itony fiakaran'ny haban-dalana itony ary hiteraka olana eo amin'ny fandraharahana sy ny varotra. Hisondrotra ny vidin-tsakafonao sy ny akora nohafarana satria hilaza ireo mpivarotra fa mila manonitra ny vola lanin'izy ireo (haba).
Nilaza i Jeff Cuellar fa efa niteraka fangirifiriana maro ny “adin'ny saran-dalana” amin'ny fefiloha :
Tsy vitany hoe tetezana ihany ilay fefiloha- fa mampifandray ny firenena roa tonta izay iankinan'ireo varotra marobe mandalo amin'ireo arabe mandroso sy miverina ireo. Tokony ho fantatry ny roa tonta fa ny fampakarana sara na haban-dalana ataon'ny andaniny dia mety hiteraka setriny avy amin'ny ankilany hoe “hampiakariko ihany koa ny haban-dalako!”.
Ankehitriny, tafiditra ao anatin'ny karazana “adin'ny saran-dalana ” isika izay hiafara amin'ny fandratràna ny rehetra.
Ao Malayzia, saofera bus teo amin'ny 100 teo no nandà tsy handòa ilay haban-dalana vaovao tamin'ny 1 Aogositra, ka niteraka fitohanana goavana. Niparitaka izy ireo avy eo rehefa nampanantena ny manampahefana ao an-toerana fa handinika indray ny tahan'ilay haba. Noho ny “fitokonan'ireo bus”, dia mpivezivezy an'arivony no nihitsoka tao amin'ny fefiloha ary voatery nandeha tongotra mba hihazo an'i Singapore.
Commuters trek across causeway into Singapore after being stranded in JB bus strike http://t.co/jiRCZmYQH3 pic.twitter.com/AKLrAEYnLu
Nandeha an-tongotra manerana ny fefiloha mankany Singapore ireo mpivezivezy rehefa nihitsoka tao JB misy ny fitokonan'ny bus http://t.co/jiRCZmYQH3 pic.twitter.com/AKLrAEYnLu
Buses on strike across causeway due to VEP toll charges #malaysia #singapore #causeway pic.twitter.com/3RQjPYGFLQ
Fitokonan'ny bus manerana ny fefiloha noho ny fiakaran'ny haban-dalana hiditra hoan'ny fiara #malaysia #singapore #causeway pic.twitter.com/3RQjPYGFLQ
Stranded Malaysians walk across the Causeway: JOHOR BARU: Hundreds of Malay­sians stranded… http://t.co/HQ1bXES1eS pic.twitter.com/p06ijmC3K9
Nandeha tongotra manavatsava ny fefiloha ireo Malayziana tafahitsoka: JOHOR BARU: Malayziana an-jatony no nihitsoka tao…http://t.co/HQ1bXES1eS pic.twitter.com/p06ijmC3K9
Tokony hisokatra hoan'ny olona mandeha an-tongotra ao Singapore ny tetezan'i Johor mba hifanindran-dalana amin'ireo mitondra fiara sy mandòa vola.
C.N. Chong nanoratra taratasy tao amin'ny Star, gazety mpivoaka isan'andro ao Malayzia, manazava ny fiantraikan'ny fampakarana ny haban-dalana eo amin'ireo mpiasa:
Efa ratsy ihany ny fandoavana volabe tahaka izany isan'andro. Tsy hoe manankarena isika rehetra mpivezivezy isan'andro ao satria mandray Dolara Singapore
Andian'olona “voafandrika” tokoa isika mpivezivezy isan'andro ao. Afaka manamafy sy mampihena ny isan'ny fivezivezen'izy ireo noho ny fidangan'ny haban-dalana ireo Singaporeana mpizahatany , mpitsangatsangana isa-kerinandro sy ireo izay tonga hanao bizina.
Saingy tsy afaka mampihena ny isan'ireo andro tiany hiasany kosa ireo mpivezivezy isan'andro eo, izay olona miasa avokoa.
Steven Choong avy ao amin'ny Antokon'ny Rariny hoan'ny vahoaka [mpanohitra] nitaky ny mangarahara mikasika ny fanapahan-kevitra hampiakarana ny haban-dalana :
Mbola tsy nanatri-maso fikojakojana goavana tao amin'ny fefiloha mihitsy izahay Johoreana tao anatin'ny 25-30 taona hatramin'ny nanangonana ny haban-dalana.
Mendrika hahafantatra ny mangarahara avy amin'ireo minisitera sy departemanta tompon'andraikitra ny vahoaka ary tokony ambara mba hamarinin'ny vahoaka avy hatrany ny totalin'ny vola miditra sy ny vola mivoaka.
Hiteraka fidiram-bola sy tombotsoa miavosa eo amin'i Singapour sy Malayzia ny “ady haban-dalana”, saingy tokony hodinihan’ny firenena roa tonta kosa indray ny fiantraikan'izany ao anatin'ny fotoana maharitra eo amin'ny toekaren'ny roa tonta.